कालिका नि.मा.वि. तिप्ल्याङ र नयाँ भवन | PUNVC Organization
आज भन्दा ६ बर्ष पहिलाको कुरा हो । म भिसी बाबा लाई लिएर गाउँमा गएको थिए । भिसी बाबाको इच्छा अनुसार गाउँमा भुमे पूजा गर्नु थियो । चैत्र महिनामा परेको भुमे पूजाको कार्यक्रम सकिएर बादुक गाउँ बाट तल तिप्ल्याङ बजार झरियो । तिप्ल्याङ बजारको हाम्रो आफ्नै घरमा कालिका प्रा.वि. का हेड्सर देउ राज गर्बुजा आउनु भयो र केही घरायसी भलाकुसारी भयो । त्येसपछी वहाँले कालिका प्रा.वि. लाई नि.मा.वि. बनाइदिन र स्कुलको भवन अत्यन्तै जिर्ण भएको र कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने जानकारी गराउदै
पोखरा फर्किये पछी भिसी बाबाले मलाई भन्नु भयो “त्यस कालिका प्रा.वि. स्कुल लाई त्यस क्षेत्रको सुबिधा सम्पन्न राम्रो स्कुल बनाउनु पर्छ । अब त झनै भत्किन लागेको छरे कसरी हुन्छ त्यसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ” भन्नु भयो । भिसी बाबाको कुराले मलाई धेरै सोच्न वाध्य बनायो । किनकी भवन बनाउने भन्ने कुरा सजिलो थिएन । दुई चार लाखले बनिने कुरा पनि थिएन । मैले घरमै बसेर धेरै कुरा र योजनाहरु सोचे । केही सामाजिक संस्था हरुमा काम गरेको अनुभब पनि थियो म सँग । आटे पछी गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन भन्ने मेरो सोचाइ पनि छ । तिप्ल्याङ मा गएर सबै सँग बसेर छलफल गर्ने बिचार गरे अनी फेरी तिप्ल्याङ गये । तिप्ल्याङमा स्कुलको समिती सँग हाम्रै घरमा बसेर छलफल भयो । सबैको कुरा जसरी पनि स्कुलको भवन कसरी हुन्छ छिटो बनाउने नत्र कुनै पनि बेला दुर्घट्ना हुन सक्छ भन्ने भयो । सो स्कुललाई प्रा.वि. बाट नि.मा.वि. बनाउने भन्ने सबैको सुझाव पनि भयो । मैले तिप्ल्याङ र वरीपरिका सबैलाई बोलाएर भेला बोलाउने अनी निर्णय गर्ने भन्ने कुरा राखे अनी म पोखरा फर्किये ।
केही दिन पछी तिप्ल्याङमा भेला राख्नु भ्एछ त्यसको लागि मलाई पनि आउन खबर आयो । तर म भिसी बाबालाई लियर लण्डन फर्किनु पर्ने भयो । म जान नसक्ने भये पछी मैले लिखित रुपमा भेलामा भवन् निर्माण समिती बनाउने र हाम्रो गाउँ बाट पोखरा काठमाडौं लगायत बिदेशमा बस्ने हरु सँग सहयोग माग्ने र बाँकी नपुग तुल बहादुर पुन भिसी प्रतिस्ठान मार्फत बेलायेति संस्था हरुमा पनि सहयोग माग्ने र निमावि थपको गर्नको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रकृया बुझ्न सल्लाह र सुझाबहरु पठाये । ५ सेप्टेम्बर २००८ मा हामी बेलायत आए पछी तिप्ल्याङ्मा भेला भएछ । भेलामा सबैले नयाँ भवन् बनाउने निर्णय गर्दै मैले दिएको सुझाब बमोजिम भवन् निर्माण समिती को गठन गर्नु भएछ । समितिले जिल्ला बाट ईन्जिनियर बोलाएर भवन् को नक्सा बनाइ करीब तिस लाखको अनुमानित लागत बनाएर समितिको अनुरोध चिट्ठी सहीत् मलाई पठाइदिनु भयो । मैले बेलायत बासी सबै बेगखोले हरुमा तिप्ल्याङ बाट आएको अनुरोध पत्र र प्रतिस्ठानको अनुरोध पत्र दिये । सबैले सकारात्मक् भने तर योजना अगाडि बड्न सकेन । प्रा.वि. बाट नि.मा.वि. थप
गर्नको लागि ७५००० रुपैया धरौटी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्नु पर्ने रहेछ । सो रकम पनि हामीले नै उपलब्ध गराये पछी निमावि थप्न सम्भव भयो । तुल बहादुर पुन भिसी र क्याप्टेन अल्मान्ड भिसी परिवारको राम्रो सम्बन्धले गर्दा पनि पनि यो योजना सफल भएको हो । क्याप्टेन अल्माण्ड र तुल बहादुर पुन भिसी एकै प्लाटुनको एकै सेक्सन बाट एउटै युद्धमा लडेका थिए । अत्यन्तै बहादुरीका साथ् लड्दै गर्दा क्याप्टेन अल्माण्डको युद्ध मैदान मै विरगती भयो । त्यसैले वहाँलाई मरणोपरान्त भिक्टोरिया क्रस् प्रदान गरिएको थियो । सो भिसी तक्मा वहाँको दिदीले थाप्नु भएको हो । वहाँको दिदी मार्गुएरिट अल्माण्डले तुल बहादुर पुन लाई आफ्नै भाई मान्ने भएकोले दुबइ पारिवारको सम्बन्ध राम्रो थियो । पछी २००९ मा मार्गुएरिट अल्माण्डको निधन पछी वहाँकी छोरीहरुले भिसी बाबालाई भेट्न आउनु भै आमाको इच्छा बमोजिम तुल बहादुर पुन भिसीले गर्नु भएको सामाजिक कार्यहरुमा केही सहयोग गर्न सकिने बिचार गर्नु भएकोले मैले तिप्ल्याङ स्थित कालिका स्कुल को भवन् भिसी बाबाले स्थापना गर्नु भएको तर अहिले अत्यन्तै जिर्ण भएकोले पुन निर्माण को लागि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको थिए । मार्गुएरिट अल्माण्डको कि छोरीहरु बेलायत र अस्ट्रलियामा बिभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा सङ्लग्न भएको हुनाले पनि अनुरोध गर्न सजिलो भयो ।
गोर्खा आवासिय अधिकारको मुद्धाको साक्षी बस्दै गोर्खा आन्दोलनको नेत्रित्व गर्नु भएकोले भिसी बाबा बेलायतमा सेलिब्रेटी हुनु भएको थियो । भिसी बाबालाई पिता मान्दै बेलायतकी चर्चित सिने अभिनेत्री तथा समाजसेवी जोआना लम्लीले गोर्खाहरुलाई साथ दिदै आन्दोलनको नेत्रित्व गरी दिईन । दोस्रो विश्व युद्धमा जोआनाको पितालाई दुश्मनको गोली लागेर सख्त घाइते भएको गम्भिर अवस्थामा वहाँलाई बोकेर सुरक्षित ठाउमा पुराएको हुनाले वहाँको ज्यान बाचेको थियो । त्यसपछीको दुई बर्ष पछी मात्र जोआना जन्मेकी थिईन । येसरी एउटा गोर्खाको गुणले गर्दा पनि सारा गोर्खाहरुलाई आवासिय अधिकार दिलाउन सफल पनि भईन ।
गोर्खा हरुको आवासिय अधिकारको मुद्धा जिताउन सफल भये पछी जोआनालाई गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्टले बेलायेति राजकुमार प्रिन्स चार्ल्स पछीको दोस्रो ठुलो पद् सह सँरक्षकमा मनोनित गर्यो । लण्डनमा आयोजित गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्टले गरेको आर्थिक सन्कलन अभियानको घोषणा सभामा जोआनाले भिसी बाबा लाई पनि बोलाउनु भएको थियो । त्यस कार्यक्रममा मैले तिप्ल्याङ्मा भिसी बाबाले स्थापना गर्नु भएको स्कुल अत्येन्तै जिर्ण अवस्थामा छ क्याप्टेन अल्माण्ड भिसी को परिवारले पनि सहयोग गर्ने बचन् दिनु भएको छ तपाईंले पनि मदत् दिनु पर्यो भनेर कुरा राखे । जोआनाले मलाई “भिसी बाबाले मेरो पितालाई लगाएको गुणले गर्दा आज म यो संसारमा छु भिसी बाबा मेरो पनि बाबा समान हुनुहुन्छ म सके सम्म कोसिस् गर्नेछु” भनिन । त्यस लगतै क्याप्टेन अल्माण्ड भिसी को परिवार जोवाना र गोर्खा वेल्फेयर को संयुक्त बैठक बसेर स्कुल बनाइदिने निर्णय भएछ ।
त्यस कार्यक्रम को एक हप्ता पछी मलाई गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्ट बाट खबर आयो । तिप्ल्याङ्मा स्कुलको नयाँ पक्की भवन् बनाउने जीम्मेवारि जोआनाले गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्टलाई दिनु भएछ । छिट्टै नै वेल्फेयर बाट ईन्जिनियरहरु तिप्ल्याङ जादैछ भन्ने जानकारी भयो । म एकदम खुशी भये । मैले भिसी बाबालाई पनि भने भिसी बाबा पनि धेरै खुशी हुनु भयो । मैले जोआनालाई फोन गरेर धन्यवाद भने ।
अहिले तिप्ल्याङमा कालिका निमाबी को लागि १० कोठे सुबिधा सम्पन्न पक्की भवन् बनिसकेको छ । सो भवनको समुद्घाटन १७ अप्रिल २०१२ मा जोवाना लम्ली बाट भएको थियो । अहिले अर्को ३ कोठे पक्की भवन् र एउटा किचेन सहितको सानो सभा हलको पनि निर्माण भैराखेको छ । यस भवनको नाम “तुल बहादुर पुन भिसी स्मृति भवन्” राखिएको छ । भवन् बनाउदा त्यहाँका स्थानियहरुले पनि धेरै दु:ख मेहनत गरेका छन । तुल बहादुर पुन भिसी प्रतिस्ठान को अनुरोध, जोआना लम्ले, क्याप्टेन अल्माण्ड भिसी पारिवारको को बिशेष सहयोगमा र गोर्खा वेल्फर ट्रस्ट को सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा भवन् निर्माण सम्पन्न भएको हो । स्कुल ब्यवस्थापन् समिती, आमा समुह, युबा क्लब लगायत सबै स्थानियबासीहरुको सहयोगले गर्दा पनि यो योजना सजिलै सम्पन्न हुन सकेको हो । अन्तत: आटे पछी र सबैको हातेमालो भये कुनै पनि सफल काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो ।